Sivavanye i-Ikea Starkvind Air Purifier ehambelana ne-HomeKit | Ndisuka kuMac
Siye savavanya isicoci somoya se-Ikea Starkvind esihambelana ne-HomeKit
Le yenye yezo mveliso okanye sinokuthi izixhobo eziye zefashoni ngakumbi kumaxesha akutshanje. Gcina ukhumbule ukuba ukuphefumla umoya ococekileyo kunye nococekileyo kusoloko yeyona nto ibalulekileyo ebantwini ukuhlala kwindawo enamazinga aphezulu ongcoliseko kunokuba yingxaki.
Entsha Isicoci somoya se-Ikea Starkvind ngoku ifumaneka ngeApple HomeKit ehambelanayo yoqhagamshelwano nakwizigqibo ezahlukeneyo ukuze kungangqubani ekhayeni lethu. Ngale ndlela sinokuthi sisicoci somoya esikrelekrele kwaye kukuba ungayicwangcisa, uqwalasele isantya kwaye ngokucacileyo uyivule okanye uyicime naphi na ngeMac, i-iPhone okanye i-iPad yakho. Kufuneka kukhunjulwe ukuba kufuna Isixhobo soqhagamshelo se-TRÅDFRI-esiyindawo ye-Ikea engaqukwanga- ukusebenzisa i-IKEA Home Smart kunye ne-HomeKit app.
Abacoci bomoya baye badlula kumanqanaba aliqela kule minyaka yakutsha nje kwaye ngoku abanye babo bade bagqume iimfuno zokulwa neentsholongwane zangoku ezifana ne-COVID-19 coronavirus. Kule meko sele siqhubela phambili oko lo mcoci ayongezi ukuhluzwa kolu hlobo lwentsholongwane, ayisebenzi ukunqanda ukosuleleka kolu hlobo. Yintoni ekhuselayo phezu eziliqela izingcolisi ezahlukeneyo esinazo ngoku emoyeni kwikhaya lethu.
1 Itafile ye-Ikea Starkvind yokucoca umoya
2 Uyilo lwetafile lufanelekile kumcoci
3 Iimpawu eziphambili, ingxolo kunye nosetyenziso
4 Izinto eziphathekayo kunye nendibano yetafile yekofu yaseStarkvind
5 Umgangatho womoya ulinganiswa ngenzwa efumana amasuntswana e-PM2.5 emoyeni
6 Ikea Starkvind ixabiso itheyibhile
Itafile ye-Ikea Starkvind yokucoca umoya
Le tafile yokucoca umoya evela e-Ikea inikeza umsebenzisi ezimbini kwenye. Ekuqaleni xa sinayo phambi kwethu inokubonakala inkulu ngokwemilinganiselo kodwa ilungile njengetafile yekofu kwizixhobo zethu ukongeza ekucoceni umoya kwigumbi lethu okanye kwigumbi.
Eyona nto ingcono, ibonelela nge ukhetho loqwalaselo lwesandla enkosi kwi-roulette eyongeza kwicandelo labalandeli. Kuyenzeka ukuba uyisebenzise kwimowudi ezenzekelayo okanye uqhagamshele kwisixhobo soqhagamshelo se-TRÅDFRI ukuze usilawule kwi-IKEA Home Smart app okanye kwi-app ye-HomeKit.
Ukusuka kwivili lomkhethi wesandla ungahlengahlengisa izantya zokucoca. Ukuba siyishiya i-roulette icinezelwe, ivaliwe kwaye ngaloo ndlela siyakuphepha ukuba abancinci ekhaya banokudlala. Sikwanayo ne-LED ekhanyisa ngamandla asezantsi ebonisa ukusebenza, ukuvaleka komcoci kunye nokutshintsha kwesihluzi. Kulula ngokwenene ukusebenzisa zombini ngesandla kunye ne-app.
Uyilo lwetafile lufanelekile kumcoci
Itheyibhile inoyilo olwenziwe nguDavid Wahl. Ininzi kakhulu kwisitayile se-Ikea kodwa ukuba awufuni itafile, sinokukhetha ukukhetha isicoci somoya esinendawo yokuma ngaphandle kwetafile, siyivumela ukuba ibekwe ngokuthe nkqo kulo naliphi na igumbi.
Umbala we ezi zicoci zomoya zifumaneka kwiindidi ezimbini: ezimnyama nezimhlophe yomibini imodeli enetafile kunye nenye engenatafile. Kwimeko yokukhetha umbala omnyama (oyiyunithi esiyivavanyile) itafile ifika kwithoni emnyama emnyama kwaye kwimeko yokukhetha isicoci esimhlophe, itafile ilula. Esi sixhobo sifakwe i-oki veneer.
Sinokuthi olu hlobo lwetafile lunokuba luncedo kumagumbi okutyela, amagumbi okuhlala, amagumbi okufundela okanye izinto ezinjalo ngaphezu kwegumbi lokulala. Kule meko ndiya kukhetha ngokwam imodeli engenayo itafile ukukwazi ukuyifumana ngenye indlela. Oku kuya kuxhomekeka ngokucacileyo kumsebenzisi ngamnye, into entle kukuba nazo zombini iinketho ezikhoyo kwaye ukwazi ukuzikhethela ngokwakho.
Iimpawu eziphambili, ingxolo kunye nosetyenziso
Kule meko kubalulekile ukuqaphela ukuba i-Ikea ibonisa inqanaba lesandi esisebenzayo kwisantya se-5 ye-3dB (A) (51dB (A)) kunye namandla angama-33.0W (25.0W) ngoko ke ziqinile. Kwimeko nayiphi na into akukho ngxolo kwi-speed 1 enikezela i-24dB (A) (24dB (A)) kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwi-2.0W (1.9W).
Uqhagamshelo kunye nesixhobo esiphathwayo ngengqiqo ifuna hub ye-Ikea ukuba sifuna ukwenza izenzo ezahlukeneyo ngaphandle kwekhaya, kuyo nayiphi na imeko le hub nayo ithengwe ngokwahlukeneyo. Kunxibelelwano kunye ne-Ikea Home Smart app kufuneka silandele amanyathelo kube kanye cofa iqhosha lokubhangqa ecaleni kwe-RESET. Ilula kwaye kufuneka ulandele amanyathelo abonisiwe.
Ubude bekhebula: 1.50 m
Ukuphakama: 55 cm
Ubunzima be-7,9 kg
Izinto eziphathekayo kunye nendibano yetafile yekofu yaseStarkvind
Ayintsonkothanga kwaphela kwaye nabani na angayihlanganisa. Ngokusengqiqweni njengazo zonke - okanye phantse zonke - iimveliso ezithengiswa yi-Ikea kwiivenkile zayo, le tafile inesicoci somoya kufuneka idityaniswe ekhaya ngumsebenzisi. Singayithetha loo nto ayinayo nayiphi na ingxaki kuyo.
Kwibhokisi sifumana yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukudibanisa itafile kunye ne-purifier ngaphandle kweengxaki, ukusuka kwizixhobo ngokwazo ukuya kwincwadana encinci yokufakela imilenze kunye ne-purifier. Ngaphakathi sifumana isihluzi kunye nayo yonke into eyimfuneko ukuyinyusa kwaye isebenze. Ngamafutshane, yonke into ilula kakhulu.
Kule meko izixhobo ze tibhodi ikumgangatho oqhelekileyo kwifanitshala ye-Ikea kunye ci-plywood ene-pigment lacquer kunye ne-oki veneer. Sinokuthi ixhathise kakhulu ubunzima bombulelo kwipuya kwe I-birch eqinile egqunywe kwi-lacquer enemibala. Kwinxalenye ye-skeleton into esetyenzisiweyo yintsimbi ye-galvanized.
Kwisicoci ngokwayo, eyona nto iphambili ngokubhekiselele kwizinto eziphathekayo yiplastiki. Eyona nto ingcono kakhulu kukuba ibonakala ixhathisa kwaye iphila ixesha elide nangona kuyinyani ukuba imivumbo embalwa iya kuqhutywa ngelixa. ibekwe ngobuchule ngezantsi kwetafile yekofu.
Intambo yokudibanisa eludongeni iqhutywe nge-slot kwenye yemilenze yetafile. Ngakolunye uhlangothi, i-transformer ifihliwe kwi-drawer ngaphakathi kwisicoci ukuze ingashiywa emhlabeni okanye ijinga. Indlela elungileyo yokuyifihla.
Umgangatho womoya ulinganiswa ngenzwa efumana amasuntswana e-PM2.5 emoyeni
Isivamvo esongezwa sesi sicoci UStarkvind ubhaqa amasuntswana e-PM2.5 emoyeni. Sinokuthi ukusebenza oku kukuhle kwaye ngakumbi xa sisusa isihluzo esisithwala ngaphakathi emva kwesiqingatha sonyaka wokusetyenziswa. Eli linqaku eliphambili ekuqondeni ubuninzi bokungcola okungena emiphungeni yethu kwaye kutheni abacoci bomoya baye baduma kakhulu ngeli xesha.
Izihluzi ezongeziweyo kwibhokisi njengoko sitshilo ngasentla kodwa kukho ukhetho lokuthenga i isihluzo sekhabhoni esisebenzayo kwaye udibanise ezi zimbini kwisicoci esifanayo. Kule meko ngaphakathi kwebhokisi iIbandakanya isihluzo samasuntswana.
Ukutshintsha izihluzi kulula ngokwenene, Siphakamisa ibhodi egxininiswe kwaye ibanjwe yizikhonkwane ezine emacaleni, sisusa i-tabletop kwaye ngoku sinokufikelela ekucoceni i-pre-filter okanye ukutshintsha i-particle filter. Ngaloo ndlela kucetyiswa ukuba utshintshe izihlungi rhoqo kwiinyanga ezi-6 ngu-Ikea, kodwa i-app ye-Ikea Home Smart inika icandelo apho unokuthi "ubenze mnyama" izihluzi nge-smartphone yakho ukuze ubone ukuba kufuneka uzitshintshe ngokwenene okanye hayi.
Isantya sokukhutshwa komoya ococekileyo (CADR) kubuninzi / ubuncinci bamandla efeni yi-240/45 m3 / h ngesihluzo se-particle kunye ne-gas filter efakiweyo. Ngaphandle kwezantya ezisezantsi zabalandeli, isicoci somoya sithe cwaka ngenene, ngoko ke unokusishiya sisebenza ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuphazamiseka.
Umenzi we-Ikea ubonisa ukuba emva kokutshintsha icebo lokucoca, cinezela iqhosha LOKUSETHA imizuzwana emi-3. Oku kusetwa kwakhona kuza kuphinda kumiselelwe indawo yesibali somjikelo wokucoca.
Ikea Starkvind ixabiso itheyibhile
Inketho yokucoca umoya ngaphandle kwetafile ixabisa i-euro ezingama-99 e-Ikea, imodeli ifumaneka kumnyama nomhlophe. Kwimodeli yovavanyo ixabiso li-149 euro kwaye ifumaneka ngemibala emibini egqityiweyo efana nesicoci ngokwaso.
Ngokwenene awuqondi ukuba mangaphi amasuntswana esiwaphefumlayo de ukhwele isicoci somoya esinjalo. Ngengqiqo wonke umntu ukhululekile ukuthenga okanye hayi olu hlobo lwezixhobo. Kule meko, siqinisekile ukuba xa unolu hlobo lwesixhobo ekhaya (nokuba luvela e-Ikea okanye hayi) uqala ukuyibona ngamehlo ahlukeneyo, ngakumbi ukuba uhlala kwizixeko ezikhulu okanye kufutshane neendawo apho ungcoliseko luphezulu ngesizathu. okanye enye.
Starkvind evela Ikea
Uyilo olulula kodwa olusebenzayo lwetafile
INdibano kunye nokudibanisa
Yinto enkulu kodwa yindlela uninzi oluyiyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Siye savavanya isicoci somoya se-Ikea Starkvind esihambelana ne-HomeKit
Phinda unike igama iMacBook Air? I-rumor ibonisa ukuba ngo-2022
NgoLwesihlanu we-26 "iiNtsuku eziKhethekileyo zokuThenga ze-Apple" ziqala